BBC Somali - Warar - Kenya: Kismaayo gacan nagu siiya
Kenya: Kismaayo gacan nagu siiya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 12 June, 2012, 11:21 GMT 14:21 SGA
Kismaayo waa magaalo kheyraad badan
Midowga Yurub ayaa diiday baaq uga yimid Kenya oo ay ku weydiisatay in ciidammada badda ee Yurub ay ka gacan ka geystaan qabashada magaalada Kismaayo.
Afhayeen u hadlay ciidanka Midowga Yurub ee la dagaallamaya burcadbadeedda, ayaa sheegay in qabshada Kismaayo ay tahay wax k baxsan hawshii loo xil saaray ciidankaas.Raiisal Wasaaraha Kenya, Raila Odinga, ayaa waydiistay ciiidamada Midowga Yurub ee la dagaallamaya burcad badeeddu in ay gacan ka geystaan qabsashada magaalada Kismaayo ee Soomaaliya.
Kismaayo ayaa ah magaalada ugu wayn ee ay al Shabaab haysato waxayna dekedda ka heshaa dakhliga ugu badan iyo saanad.
Raila Odinga ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in ciiidamada Midowga Afrika oo ka kooban afar kun inay qabsadaan Kismaayo ilaa bisha August.
Awoodda Midowga Yurub askar tooda ayaa la sii ballaariyay dhawaan si ay ugu suurto gasho inay dhulka ku weerari karaan burcadda.
Raila Odinga ayaa sheegay in uu waydiistay Maraykanku in uu bixiyo qarashka ku baxaya weerarka lagu qabanayo Kismaayo.